MINA STARSIAK HAWK WATHI 'UKUTSHATA KWAKUNZIMA' - IINDABA
Mina Starsiak Hawk Wathi 'Ukutshata Kwakunzima'
Inkwenkwezi yamathambo alungileyo uMina Starsiak Hawk watshata umyeni wakhe, uSteve Hawk, ngo-2016. Esi sibini sinonyana oneminyaka emithathu ubudala ogama linguJack kunye nentombi egama linguCharlotte, owazalwa ngoSeptemba 2020.
UMina Starsiak Hawk Uxoxe ngomtshato wakhe ngo-Agasti ka-2021
Ngexesha lodliwanondlebe lwango-Agasti 2021 kwiKwiPodcast yothando, ibanjwe nguJen Hatmaker, wodumo loLuhlu lwaMakhaya oluKhulu, uMina Starsiak Hawk wakhankanya ngokufutshane umtshato wakhe noSteve.
U-Hatmaker ucele i-Hawk ukuba ibikhona inkalo yobomi bakhe ayithathela ingqalelo njengokuqhubeka okufana nokumbamba rhoqo ngotshintsho okanye uqhushululu lwalo naluphi na uhlobo.U-Hawk uphendule ukuba uyakuxabisa ukuzimela kwakhe. Emva koko wabelana nabanye ukuba waziqonda ukuba akakhethi cala ngenxa yezinto ezithile zobuntwana bakhe.
Utata nomama baqhawule umtshato. Khange zibekho ngokulungeleleneyo, kubekho izinto ezifana nezo - wonke umntu unezinto zakhe ezingaqhelekanga kwaye ndiye ndahamba ngenani lezinto kwindawo ebendiyidinga ukuxhomekeka kum ngokwam, ndichaza i-Hawk.
Ukwabelane ukuba amandla akhe okuba angakhethi ekuqaleni wenza umtshato waba nzima kakhulu.
Ukutshata kwakunzima ngenxa yokuba kufuneka uthande omnye umntu angene. Ke xa imicimbi ingaqhelekanga bendisoloko ndilungile, ngokufanelekileyo khange ndixhomekeke komnye umntu hayi ngemali, hayi ngokweemvakalelo, hayi nakweyiphi na le nto, ukuze ndiphinde ndiwele ekucingeni ukuba ndingaziphatha ngokwam, ndikhankanye umama wababini. Ukuba yonke into iwela ecaleni, ndiyakwazi ukuziphatha kwaye iimeko ezininzi ziluncedo kwaye ngokubanzi ayiloncedo ngenxa yoko ijike ibe yinkani kunye nokuba yedwa. Akunjalo, uyaqonda, kuzo zonke izinto ezinokwenzeka kwisithuba sokugqibela sobomi bam, nangona kanye ndandisemncinci ukuba ndiqinisekile.
Ngelixa wayethetha noHatmaker, uHawk wongeze ngokukhankanya indlela isangqa sakhe sezihlobo esibe sisibonelelo sentuthuzelo kwiimeko ezinzima.
Mna nomyeni wam silungile. Mna nabantwana bam sibahle kodwa ke niyaqonda, amandla endlu kunye nezinto zomsebenzi ezilula - uyaqonda, ndizinikele kakhulu, uyabona ke, kufuneka ubambe, kufuneka ubambe ukusebenza. Kodwa njengaxa ndiyekile kwaye ndiyicingisisa, kufana nokuba kukho inani le-s *** elenzekayo kwaye ndinabantwana bam abagqwesileyo, umyeni wam ophakamileyo, ngokungathi andithatheli ingqalelo xa ndisele njengaxa ndithatha inxaxheba noJack, kwabelwana ngeHawk. Okanye uCharlie-9-iinyanga kwaye yena unamafutha kwaye mhle kwaye yena okanye ufana nokumhleka **, olo hlobo lokuthanda luzisa zonke kwakhona ngokudibeneyo. Kwaye kufana nokulunga kukho izinto ezininzi ezenzeka phaya, nangona kunjalo intle kwaye yonke into izakulunga.
UMina Starsiak Hawk Wathetha Malunga neNanny yaBantwana baKhe kwiNgoFebruwari 2021
Ngelixa ndithetha noINew York Live ngoFebruwari 2021, U-Hawk wabelane ukuba unombulelo kubantwana bakhe abahlala kwi nanny, uHana Vaughn. Uveze ukuba wayeqeshe uVaughn xa unyana wakhe wayengaphantsi kweenyanga ezili-12 ubudala.
Sifumene ithamsanqa elikhulu ngenxa yokuba ngoku ujonge ngamnye kubo imini yonke kwaye uyenza ukuba mna noSteve singakwazi ukusebenza, sikhankanye i-HGTV persona.
Uqhubeke wathi amaqabane akhe, abo basebenza ukongeza utata nomama, babenengxaki ekufumaneni abasebenzi abakhathalela abantwana abanjengoVaughn.
Sinamaqabane ebesoloko efuna ngokungapheliyo kwaye sifana, 'Uxolo, sinethamsanqa, eyethu ilungile, uya kuba nakho ukungabinaye,' ukhankanye uHawk.
Izigaba: Hulu Iwiki Iindaba
I-louis dejoy net i-2020 efanelekileyo
Ukufunyanwa kweenkwenkwezi klingons kujongeka kwahlukile
ukuvota ukudanisa neenkwenkwezi
Ngaba i-ups ihambisa ngomhla we-columbus?
ubuhlanga be-niki kunye ne-gabi